Simbi Simbi Sisitimu Vagadziri uye Vatengesi - China Simbi Simbi Sisitimu Factory
Kusarura kwakasarudzika kwezvigadzirwa zvekambani Nekuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji, iko kushandiswa kwesimbi masisitimu mukugadzira mainjiniya munyika inowedzera uye nekuwedzera. Welding yakakosha yekugadzirisa tekinoroji mune yesimbi mamiriro ekugadzira. Zvinoenderana nehuwandu kubva kune dzakasimukira nyika, iyo simbi inoshandiswa chete mushure mekusanganisa maakaunzi eanosvika makumi mashanu muzana muzana yesimbi inoburitsa gore rega. Pakazopera 1980s, welded simbi hurongwa vakanga accounted for 30% of ari S ...
Nhanganyaya technical simba rekambani: Iyo kambani ine vanogadzira vanomwe, vatatu vakaumbwa dhizaini, 2 mapurani ekugadzira, uye 1 mvura nemagetsi dhizaini, vatatu vavo vakashanda mukugadzira dhizaini kweanopfuura makore matatu. Mune inoenderana indasitiri yehunyanzvi, hushoma hunoshanda hupenyu hwevakagadziri makore mashanu, uye hwakawanda hupenyu hwekushanda hwasvika makore gumi nematatu. Hofisi yekugadzira yekambani ine 2 simbi mamiriro ekudzamisa dhizaini; Iyo Injiniya Vanodzoka ...